Waa maxay sababta loo isticmaalo laba mataano ah oo dhismaha ah - Gofumed
Maarso, 2019 Engineering, tabo cusub
Wax walba oo nagu wareegsan ayaa noqda dijital. teknoolajiyada Advanced sida sirdoonka macmal iyo Internet of Waxyaabaha (IoT) waxa ay noqonayaan qaybo muhiim ah warshadaha kasta, samaynta geedi socodka ka dhaqso iyo ka fiican marka la eego qiimaha, waqti iyo gacameed. Diiwaangelinta dhijitaalka ah ayaa u oggolaanaysa in warshad kasta ay ku guulaysato wax ka yar; ugu yaraan this tilmaamay ayna raadinayaan durugsan ee ugu dambeeyay ee xoog iyo algorithms caqli kombiyuutarka, oo ay la socdaan horumarka farsamada ee dareemayaal, miniaturization, robotics iyo drones, ay caawiyaan xataa warshadaha dhismaha in ay ogaadaan sida ay isku dari kartaa aduunyada dhijitaalka ah iyo kuwa jir ahaaneed si ay u dhistaan ​​dhismayaal jaban, ciriiri leh iyo kuwo ammaan ah waqti yar.
Tusaale ahaan sidan ayaa ah sida diyaaradaha ay u oggolaadaan qabashada sawirro badan oo wakhti gaaban ah, taas oo fududeynaysa hawsha qorshaynta. Laakiin ma aha oo keliya, tan iyo inta ay ku xiran tahay dareeraha la heli karo diyaaradda, waxay isla mar ahaantaana heli kartaa xogta aad ka mid noqon kartid sifooyinka muuqaalka kaasoo siinaya qiime wayn oo dheellitiran sawirqaadaha sawirqaadaha fudud. Fikraddan oo si dhab ah wax looga beddelayo wejiga AEC waa warshad "Digital Twins" iyo tusaalooyin dhowaan ah oo ku saabsan xaqiiqda la kordhiyay ee Hololens2 caddaynno in aan ka helno wax badan oo ka baxsan warshadaha madadaalada.
Sida laga soo xigtay warbixintii dhawaan Gartner, isbeddelka "Digital Twin" wuxuu la xidhiidhaa "Peak of expectation". Maxaa kale? 5 illaa sanado 10, isbeddelka ayaa la filayaa inuu gaaro "Baaxda wax-soo-saarka".
Gartner hype wareega teknolojiyada cusub 2018
Waa maxay laba mataan?
Labo dhajiye oo lambar ah ayaa loola jeedaa habka fiilada ee nidaam, badeeco ama adeeg. Labada lamaane waa isku xir u dhexeeya sheyga dhabta ah iyo matalaadda dhijitaalka ah oo si joogta ah u isticmaalaya xogta xasaasiga ah. Dhamaan xogta waxay ka yimaadaan dareemayaasha ku yaal shayga. Wareegga dhijitaalka ah ayaa markaa loo adeegsadaa sawirada, qaabaynta, falanqaynta, jilidda iyo qorshaynta dheeraadka ah.
Si ka duwan qaabaynta BIM, labada mataanuhu maahan in ay wax ka qabtaan shay la leh matalaad joogta ah. Tusaale ahaan, geedi socodka dhaqdhaqaaqa, feylka qofka, ama xidhiidhada xiriirka ah ee u dhexeeya dhinacyada xiisaha leh iyo unugyada maamulka.
Dabcan, labada twin ee dhismayaasha waa mid aad u soo jiidasho badan, ugu yaraan berrinka mashruuca. Iyada oo la abuurayo dhismo dhijitaal ah oo dhismo ah, mulkiilayaasha dhismaha iyo ganacsatada ayaa ka hortagi kara dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhaca dhismaha dhexdooda, kobciya xeeladaha dhismaha oo markaa dhismayaal ammaan ah. Tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa laba dhajiye oo dhismo ah oo caddaynaya sida ay uga jawaabi doonto dhulgariir weyn. Iyadoo ku xiran natiijada, waxaad sameyn kartaa isbeddelada lagama maarmaanka ah ee dhismaha, ka hor inta aan la gaarin dhacdooyinka iyo waxyaabo ka baxsan xakamaynta. Tani waa sida labeenta digital-ka ah dhismaha ay badbaadin karto nolosha.
Sawir muuqaal ah oo ka mid ah: dhismaha Summit XMUMX
Labada mataano ayaa u oggolaanaya naqshadeeyaha dhismaha in uu hayo dhammaan macluumaadka la xidhiidha dhismaha la heli karo waqtiga dhabta ah, oo la xidhiidha feylka nolosha oo ay ka mid yihiin rukunka, naqshadeynta, dhismaha, dayactirka iyo hawlgalka hantida. Waxay bixisaa deg-deg ah oo ku saabsan dhammaan macluumaadka ku saabsan goobta dhismaha. Waxay ka caawisaa dhisayaasha inay had iyo jeer hubiyaan xitaa waxyaabaha ugu muhiimsan, sida tallaabooyinka loo baahan yahay ee beershir.
Sida ugu dhow oo ay wadaagaan Mark Enzer, CTO, MottMacDonald ee dhismaha SMART Summit 2019, markaad ka hadlayso inta jeer ee laba-labbo ee cusbooneysiinta cusbooneysiinta; "Ma ahan waqti dhab ah, waa waqtigii saxda ahaa."
Faa'iidooyinka isticmaalka laba mataano ah ee dhismaha.
Isticmaalka saxda ah ee tiknoolijiyada ayaa marwalba ka dhigaya qaabab wax ku ool ah Tusaale ahaan, mataanaha dhijitaalka ah, iyagoo u oggolaanaya simaamadaha inay yeeshaan suurtagalnimada inay qaadaan dhibaatada ay keento masiibooyinka dabiiciga ah iyo dadka sameeya. Waxay ka caawin karaan muwaadiniinta inay helaan nolol ka badbaado leh. Tusaale ahaan, marka laga hadlayo kaabayaasha, halkaas oo loo malaynayo in badanaa gaadiidka, iyada oo loo marayo isticmaalka software-ka jilitaanka lugta, waxaynu saadaalin karnaa goorta iyo meesha ay noqon doonto ciriiri. Iyadoo la soo bandhigayo isbeddelada lagama maarmaanka u ah qaabka dijitaalka ah ee kaabayaasha, waxaa suurtogal ah in lagu guuleysto amniga, waxtarka iyo hoos u dhigida kharashaadka hawlgalka dhismaha iyo dayactirka hantida.
Faa'iidooyinka ay isticmaalaan laba mataano ah ee dhismaha waa kuwo badan. Qaar ka mid ah ayaa lagu faahfaahiyay hoos:
Kormeer joogto ah oo ku saabsan horumarka dhismaha.
Kormeerka dhabta ah ee goob-dhismeedka dhismaha iyada oo loo marayo twin-ga digital-ka ah wuxuu xaqiijinayaa in shaqada la dhammaystiray ay ku haboon tahay qorshooyinka iyo qeexidda. Labada mataano, waxaa suurtagal ah in lala socdo isbeddelka qaab-dhismeed ee la dhisay, maalin walba iyo saacadba, iyo haddii ay dhacdo wax is-bedel ah, tallaabo degdeg ah ayaa la qaadi karaa. Intaas waxaa sii dheer, xaaladda dhabta ah, dildilaaca ee ku yaalla saldhigyada ama barokac wax kasta oo ku yaal goobta dhismaha si sahlan ayaa lagu xaqiijin karaa twin digitanka ah. Soo helitaanka noocan oo kale ah ayaa keenaya kormeer dheeraad ah iyo dhibaatooyin si dhakhso ah loo ogaado, taasoo keentay xalal fara badan.
Isticmaalka ugu wanaagsan ee ilaha.
Labada mataano ee xitaa waxay keenayaan in si wanaagsan loo qoondeeyo khayraadka iyo in ay ka caawiyaan shirkadaha inay joojiyaan wakhtiga wax soo saar ee dhaqdhaqaaqa iyo ka shaqeynta qalabka aan loo baahnayn. Isticmaalka tiknoolajiyadaan, waxaa laga yaabaa in la joojiyo xadiga dheeraadka ah waxaana sidoo kale sahlan in si qoto dheer loo saadaaliyo shuruudaha khayraadka ee goobta.
Xitaa isticmaalka qalabka waa lala socon karaa oo aan la isticmaalin ayaa loo sii deyn karaa shaqooyinka kale. Tani waxay badbaadineysaa waqti iyo lacag.
Ammaanka ayaa ah mid walaac weyn ka qabta goobaha dhismaha. Labada mataano, iyagoo shirkadaha u oggolaanaya inay dadka iyo goobaha khatarta ah ee goobaha dhismaha ah u raadiyaan goobaha dhismaha, waxay ka caawiyaan in ay ka fogaadaan isticmaalka qalabka ammaan darrada iyo waxqabadyada goobaha halista ah. Iyada oo ku saleysan xogta waqtiga dhabta ah, nidaamka ogeysiinta hore ayaa la horumarin karaa kaasoo u oggolaanaya maamulaha dhismaha in uu ogaado marka shaqaale beeruhu ku yaalaan gobol aan ammaan ahayn. Ogeysiin ayaa sidoo kale loo diri karaa qalabka la qaadan karo ee loo shaqeeyn karo si looga hortago khatarta ka timaadda.
Faa'iidooyinka isticmaalka farsamada casriga ee dhismaha waa kuwo badan. Caadooyinka hore waa adag yihiin, laakiin si loo helo waxtar dheeraad ah ee dhismaha, waa lagama maarmaan in la wareego. Isticmaalka tiknoolajiyada twinfiriyadeed ee dijital ah waxay abuuri kartaa cusbooneysiin weyn oo ku saabsan horumarinta kaabayaasha iyo keenista tayada iyo waxtarka waxtarka cusub. Wershaduhu waa inuu diyaariyaa oo la qabsadaa deegaanka isbeddelka dijitalka ah!
Waxaan fursad u helnay inaan wareysi la yeesho asxaabteenii Brazil ee sannadkii hore, London. Iyadoo la adeegsanayo twin digital, Airport-yada José Richa Airport (SBLO) ee Brazil, oo ah midka afaraad ee ugu weyn ee koonfurta Brazil ayaa awood u leh inay maamusho xogta madaarka iyo in ay xaqiijiso hufnaantooda hawlgalkeeda.
Dareen baahida loo qabo in si wanaagsan loo abaabulo xogta garoonka, operator garoonka SBLO, Infraero go'aansaday in la abuuro oo mataano ah digital in dhaqmaan sida mesh a of xaqiiqada iyo bakhaar dhexe ee dhammaan xogta garoonka diyaaradaha, oo ay ku jiraan kaabayaasha, dhismayaasha, nidaamka dhismaha , goobaha iyo khariidadaha iyo xogta maaraynta.
BIM iyo GIS oo ay weheliyaan codsiyada Bentley ayaa loo isticmaalay inay kudhigaan xarumaha 20 ee jira, kuwaas oo daboolaya in ka badan mitir laba jibbaaran oo xayndaabka garoonka diyaaradaha ah. Waxay sidoo kale qaabeeyeen dayuurad la raaco oo la raaco, laba deyrood oo duulimaad ah iyo nidaamka taxiway iyo jidadka. Kooxda mashruuca ayaa markaas abuuray xog-saameeyn balaadhan si ay u taageeraan qorsheynta iyo hagaajinta maareynta mashruuca.
Kooxda mashruuca waxay abuurtay lamaane digital ah oo ka mid ah garoonka diyaaradaha oo ay ka mid yihiin shaashadda dhabta ah ee garoonka diyaaradaha iyo xarun dhexe oo loogu talagalay dhammaan xogta diyaaradaha. Maqaalka dhexe wuxuu ka caawiyaa dadka isticmaala inay si sax ah u tilmaamaan goobta nidaamka kaabayaasha garoonka diyaaradaha, hagaajinta maareynta ganacsiga oo leh hawlo ammaan ah oo hufan. Labada lamaane ayaa sidoo kale dejiya dhammaan mashaariicda kaabayaasha madaarka gudaha, iyo sidoo kale geeddi-socodka qorsheynta iyo maareynta. Iyada oo gacan laga helayo twin digital, Infraero waxay yareyn kartaa kharashyada dayactirka oo ay ku gaari karaan hawlgallo ka wanaagsan garoonka diyaaradaha ee SBLO. Kooxda mashruuca waxay rajeynayaan in ay ka badbaadiyaan wax ka badan BRL 559,000 sanadkiiba iyada oo labadooda lamaane. Ururku wuxuu sidoo kale rajeynayaa inuu arko kororka faa'iidada.
ProjectWise waxaa loo isticmaalay in lagu abuuro mashiinka isdhexgalka garoonka, kaas oo u adeegay sida jawiga xogta ee mashruuca. Awoodda soo dejinta ee dariiqa MicroStation waxay u oggolaatay kooxda in ay abuuraan xaqiiqda dhabta ah ee dhammaan tas-hiilaadka maddaarka oo isticmaalaya dariiqooyinka dhibcaha. OpenBuildings Designer (oo horay AECOsim Dhismaha Designer) caawiyay design iyo abaabulo maktabadaha goobaha garoonka diyaaradaha si ay u qaabeeyaan terminal rakaabka, terminal xamuulka, saldhiga dabka iyo dhismayaasha kale ee jira iyo. Mashruuca OpenRoads Kooxda adeegsaday in la abuuro meelaha joomateri iyo nidaamka map track iyo caga runways, taxiways iyo waddooyinka adeegga.
Post Previous«Previous Oracle waa Kaaliyaha Aasaasiga ah ee Forum 2019 Geospatial Forum
Post Next #GeospatialByDefault - 2019 Forum Geospatial ForumNext »